Ike | Ningbo Horizon Magnetik Teknụzụ Co., Ltd.
Ningbo Horizon Magnetik Technologies Co., Ltd. bụ a pụtara ike emeputa nke obere ụwa Neodymium magnet na ya metụtara magnetik mgbakọ. Anyị nwere ike mfe gị oru ngo usoro na-enyere gị aka na-eke a ọhụrụ ngwaahịa site na echiche site na nnyefe.
Neodymium Igwe Ọdụdọ Manufacturing
Neodymium magnet n'ichepụta bụ isi nkuku nke Horizon Magnetics Strategy iji hụ na nkwụsi ike na-aga n'ihu na-eweta oke mma magnet na sistemụ ndọta ọkachasị n'oge pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, ịrị elu ọnụ ahịa na mkpụmkpụ nke ihe ụwa dị ụkọ. A na-achịkwa ike mmepụta, 500 tọn nke Neodymium magnets na-achịkwa kpamkpam na-enweghị ịgbasawanye ikike mana njikwa njikwa iji zute ndị ahịa anyị chọrọ.
Nhazi na Injinia
Anyị hụrụ ihe ịma aka n'anya ma nwee mmasị na ngwọta magnetik ahaziri iji mezuo ọrụ ndị pụrụ iche. Ihe omuma anyi na ihe omuma na ihe omuma zuru oke na sistemụ magnet nke Neodymium zuru oke na-enyere anyị aka ịnye ndị ahịa ndụmọdụ dị mma ma ọ bụ ọrụ imepụta nke na-amalite site n'echiche ruo na njedebe ngwaahịa ikpeazụ. Kedu ihe ọzọ, ọrụ injinịa laa azụ dịnụ iji nyere ndị ahịa aka ibuli atụmatụ ndị dịnụ.
Ime ụlọ na Nhazi
Ownlọ ọrụ anyị ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji arụ ọrụ na-eme ka nnyefe na oge na mma nke igwe ndọta na akụkụ akụkụ igwe na-echepụta. Ọ nwere ike ịchọta ihe pụrụ iche ndị ahịa chọrọ dịka obere, nnagide ndidi, nnyefe ọsọ ọsọ, usoro mgbagwoju anya, wdg. Karịsịa maka ngwaahịa ọhụrụ ahụ, ikike ụlọ nwere ike mepụta ihe ngosipụta n'oge iji mee ka usoro mmepe ahụ ngwa ngwa ma jikwaa ihe okike nke okike ngwaahịa ọhụrụ nzuzo.
Dị ka onye a tụkwasịrị obi na-enweghị ihe magnetị ụwa, Horizon Magnetics na-agbasi mbọ ike maka ọkwa kachasị elu iji mejuo mkpa ndị ahịa site na mmelite na-aga n'ihu. Advanced akpaka nnyocha equipments nwee a ngwa ngwa na ezi nnyocha magnetik agbanwe na n'akuku ndiiche iji hụ ọ bụla ndọta nke elu olu kwekọrọ na àgwà chọrọ na efu ntụpọ maka stringent ngwa dị ka akpakanamde. Nnukwu nzukọ ụwa na mgbakọ dị iche iche bụ RoHS na REACH nnabata.
Otu-Kwụsị Tụkwasịnụ maka Sara mbara Igwe Ọdụdọ Ngwaahịa
Tydị na nha nke mgbakọ magnet na-enye Neodymium magnet dị ka ndọta azụ, mkpuchi magnet, magnet ite, nko magnet na ụlọ ọrụ ọfịs dị na ngwaahịa maka nnyefe ọsọ ọsọ. Nchọpụta magnet nke Neodymium na ịmepụta ụlọ nwere ike ịhazi usoro magnet dị iche iche dị obere na arịrịọ. Ọkachamara na ndọta na-eme ka anyị nweta ihe ndọta ndị ọzọ na-adịgide adịgide na obere obere mana ọ dị mkpa iji jikọta n'otu mbupu n'ụzọ dabara adaba.